सफारी सिंक्रोनाइज गर्नुहोस् तपाईंको सबै उपकरणहरूमा आई-क्लाउड प्रयोग गरेर आईफोन समाचार
सफारी सिंक्रोनाइज गर्नुहोस् तपाईंको सबै उपकरणहरूमा आई-क्लाउड प्रयोग गरेर
हामीसँग आईओएसका लागि धेरै इन्टर्नेट ब्राउजरहरू छन्, सफारी बाँकी भन्दा उच्च स्थानमा छ, आईओएससँग यसको पूर्ण एकीकरणको कारण, क्रोम एक उत्कृष्ट विकल्प हो जुन आईओएस प्रयोगकर्ताहरू बीच बिस्तारै आधारभूत रूपमा विकास गर्दैछ। मलाई क्रोमको बारे सब भन्दा मन पर्ने सुविधाहरूमध्ये एउटा बिभिन्न कम्प्युटरहरू बीचको समिकरण हो, तपाईंको गुगल खाताको लागि धन्यवाद। सफारी उही प्रदान गर्दछ, आईक्लाउडलाई धन्यवाद. मनपर्नेहरू सिnch्क्रोनाइज गर्दै, अन्य उपकरणहरूमा खुला ट्याबहरू हेर्न वा तिनीहरू मध्ये कुनैबाट पठन सूची पहुँच गर्दै यो हाम्रो आईक्लाउड खाताको लागि धेरै सरल धन्यवाद हो। हामी कसरी सफारी हाम्रो सबै उपकरणहरू बीच समक्रमण गर्न यो विकल्प प्रयोग गर्न सक्दछौं?
पहिलो कुरा भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा आईक्लाउड नियन्त्रण प्यानेलमा पहुँच गर्नु हो। यदि हामी म्याक प्रयोग गर्छौं भने, हामीसँग यो प्रणाली प्राथमिकताहरूमा छ, यदि हामीले विन्डोज प्रयोग गर्छौं भने, हामीले यो हाम्रो प्रणालीमा स्थापना गरेको हुनुपर्दछ। तिमी सक्छौ आईक्लाउड नियन्त्रण प्यानेल डाउनलोड गर्नुहोस् को आधिकारिक वेबसाइट बाट एप्पल। हामी हाम्रो आईक्लाउड खातासँग कनेक्ट गर्दछौं र तपाईंको कम्प्युटरमा सिnch्क्रोनाइजेसन सक्रिय गर्न विकल्प "सफारी" चयन गर्दछौं।
अर्को चरण भनेको हाम्रो उपकरणमा जानुहोस्, मेनू «सेटिंग्स> आईक्लाउड to मा र हाम्रो खाताको साथ लग इन गर्नुहोस्, कम्प्युटरमा जस्तै, र सफारी विकल्प सक्रिय गर्नुहोस्।
हाम्रो उपकरण र कम्प्युटर को मनपर्ने सिंक्रनाइज़ हुनेछ। के तपाइँ एक बाट हटाउनुहुन्छ अर्को बाट हटाइनेछ, र तपाइँ एक मा जोड्नुहुन्छ अर्कोमा पनि देखा पर्नेछ।
पठन सूचीको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ र केहि पढ्न मार्क गर्नुभयो भने, तपाईं पठन सूचीमा पहुँच गरेर समान iCloud खातासँग कन्फिगर गरिएको तपाईंको कुनै पनि उपकरणहरूबाट यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग एक समान खाता प्रयोग गर्ने कसैबाट एक उपकरणमा खोल्नुभएको ट्याबहरू हेर्न विकल्प पनि छ। यो गर्नका लागि, तपाईंले केवल क्लाउडमा क्लिक गर्नुपर्दछ जुन उपकरणपट्टीमा देखिन्छ।
हामी मध्ये कसैको लागी चाखलाग्दो विकल्पहरु को लागी विभिन्न उपकरणहरु बाट सफारी प्रयोग। एउटा अन्तिम नोट एकचोटि तपाईंले आफ्नो उपकरणहरूमा सेवा सक्रिय गर्नुभयो, सबैमा परिवर्तन हुनको लागि यसलाई समय दिनुहोस्, अन्तिम परिणाम हेर्न केहि मिनेट लिन सक्दछ। र केहि कुरा जुन तपाइँले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि मनपर्नेहरू मर्ज हुनेछन्, अर्थात्, तपाइँका सबै यन्त्रहरू ती मिसन हुन्छन् पहिलो पटक तपाईले सिnch्क्रोनाइज गर्दा। यो दिमागमा राख्नुहोस् यदि तपाइँ तिनीहरूलाई समक्रमण गर्न अघि सफा गर्न रुचि राख्नुहुन्छ।
थप जानकारी - आईक्लाउड र आईप्याडमा एप्पलआईडी
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » सफारी सिंक्रोनाइज गर्नुहोस् तपाईंको सबै उपकरणहरूमा आई-क्लाउड प्रयोग गरेर
नमस्ते, सिंक, के यसले सफारी ब्राउजि history ईतिहास डाटा समावेश गर्दछ? त्यो हो, मैले उपकरणमा भ्रमण गरेको सबै पृष्ठहरू समक्रमण गर्न?
Mepefe लाई जवाफ दिनुहोस्
हाम्रो आईप्याडमा मौसम हेर्न उत्तम अनुप्रयोगहरू
Llumino, आईफोनको लागि सबैभन्दा सुन्दर क्यालकुलेटर